मिल्ने भए केपी ओलीलाई यो देशका ढुंगामाटो, रुख र बुट्यानले पनि भोट हाल्छन् ! – Cn Chautari
माघ ६, २०७८ बिहिबार 127
झापा भनेको नेपालका ।
अनेक राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र हो । झापाले देशलाई एकसे एक सक्षम नेता दिएको छ । ती मध्ये अग्रणी हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । केपी ओलीले राजनेताको उचाई हासिल गरिसक्नुभएको छ नेपालमा जिवित अवस्थामै राजनेताको उचाई हासिल गर्ने ।
नेता केपी ओली नै हो ।देश र जनताप्रति केपी ओलीको समर्पण, विकास प्रतिको उहाँको प्रतिवद्धता, देशको स्वाभिमान प्रति उहाँको संवेदनशीलताका कारण जनता उहाँप्रति आकर्षित छन् ।केपी ओली राजनेताको उचाईमा उठ्नु, उहाँको नेतृत्व सर्वसम्मत हुनुको कारणले पनि एमालेप्रति विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताका साथै आम जनताको आकर्षण बढेको हो ।
दमकको विशेष कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु एमालेमा पूर्ण रुपमा समाहित भइसक्नु भएको छ । अब उहाँहरु एमाले परिवारको सदस्य भइसक्नुभएको छ ।अब एमालेलाई शशक्त बनाउँदै अगाडि बढाउने ।
जिम्मेवारी उहाँहरुको काँधमा आएको छ । उहाँहरुले पदीय तथा कामको जिम्मेवारी पाउन थालिसक्नुभएको पनि छ । यस अर्थमा दमकमा एमाले प्रवेश समारोहको महत्व दूरगामी बनेको छ ।
Prevचुनावमा पैसाको खोलो बग्न सक्ने
Nextबतासको अर्को होटलमा मन्त्री आलेको छापा,नेतानै यस्तो अबशामा भेटिदा चकित
तपाई कसको पक्षमा( १.प्रेम आले, २.योगेश भट्टराई ! कमेन्ट गर्नुस्
चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारीमा सरकार